MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA EE OLDE BOSTON BULLDOGGE - EEYAHA
'Agnes waxaa iska leh' FMR's Cody ', biyo xireenkeeduna waa FMR's Baby. Labada waalidba waa nadiif Henley dhiig oo lagu hayo heer sare sanado badan. Agnes waa tusaalihii ugu fiicnaa ee firfircoonaa ee soo raacay xirmo yar. Darawalkeeda iyo xooggeedu waa adduunkan. Cayaaraha iyo adkeysiga, Agnes waa eey yar oo adag oo jecel xiisaha. Waxay ku fuulaysaa geedaha nimcada Haanta Sherman, gabi ahaanba waa cabsi la'aan. Agnes waa ey aad u macaan guriga dhexdiisa sida ay noqon karto, waxaana lagu yaqaanay inuu seexdo 'ilaa duhurkii! Waxay jeceshahay daqiiqad kasta dadka, waxayna jeceshahay carruurta. Agnes waxay leedahay muuqaal duug ah oo reer Boston ah oo si macno ahaan dadka u joojiya raadadkooda. Ey yar oo runtii xiiso badan! 22 lbs. ' Lahaanshaha sawirka Noble Boston Bulldogges
Olde Boston Bulldogge waa mid aad u jecel oo si fiican ula leh qoyska. Eygan shaqeeya ayaa ah tababar fudud oo jecel inuu ka farxiyo. Isaga damac hogaamineed iyo fahamka waxa laga filayo isaga. Milkiilayaasha waa inay go'aan ka gaaraan xeerarka guriga oo ku dheji iyaga.
Miisaanka: 25 - 45 rodol (11.3 - 20.3 kg)
Guud ahaan Caafimaadka
Olde Boston Bulldogges waxay kufiican yihiin guryaha iyo sidoo kale wadan ku noolaanshaha. Iyagu waxoogaa dhaqdhaqaaq ah kuma jiraan gudaha waxayna caadi ahaan ku shaqeeyaan bilaa daarad. Noocani wuxuu xasaasi u yahay cimilada xad dhaafka ah.
Noocan ayaa loo baahan yahay in lagu qaato a socod dheer oo maalinle ah .
madow iyo tan chihuahua eey
Qiyaastii 10 ilaa 12 sano
Jaakad jilicsan oo gaaban, ayaa si fudud loo hagaajin karaa. Shanlo oo ku caday burush adag isla markaana ku maydh markii loo baahdo oo keliya. Ku masax wejiga maro qoyan maalin kasta oo si taxaddar leh u nadiifi indhaha caanka ah. Hubi labada dhegood iyo indhaha iniinyaha cawska. Shilintu sidoo kale waxay ku dhuuman kartaa dhagaha. Ciddiyaha waa in la jarjaraa waqti ka waqti. Noocani waa celcelis daadiya.
Olde Boston Bulldogge waa asalka Boston Bull, oo ah nooca ay Boston Terrier laga soo qaatay, sidaa darteed taariikhdii hore ee Olde Boston Bulldogge waxay la mid tahay tan Boston Terrier. Waa nooca iyo qaabka asalka ah ee markii hore loo yiqiinay 'Dibida madaxa leh iyo Terrier' ee Boston, USA (noocii hore ee Boston Terrier). Olde Boston Bulldogge waa nooc ka duwan Boston Terrier.
IOEBA = Ururka Bulldogge ee Olde English
'Tani waa Loki oo jira hal sano jir ah Olde Boston Bulldogge. Wuxuu ka yimid Rutan, FMR iyo khadka O'klassic. Isaga ayaa si aad ah u wada oo aad u jecel oo diyaar u ah inuu ka farxiyo! Waxaan helnaa tan badan oo bogaadin ah muuqaalkiisa iyo muuqaalkiisa meel kasta oo aan aadno. '
Loki the Olde Boston Bulldogge oo ah 1 sano jir ka yimid Rutan, FMR iyo khadka O'klassic.
'Kaw waxaa soo saaray' Goodtime Kennels 'qeybta sare ee Clyde. Clyde waa wiil weyn oo laf culus iyo muuqaal weyn oo Olde Boston ah. Biyo xireenka Kaw waa cayaaraha dabiiciga ah iyo soo saaraha cayaartoyda, Goodtime's Daisy. Kaw waa Kanadisiyad dhalasho iyo dhalasho leh, waxayna saameyn togan ku yeelatay halkan Mareykanka Kaw waa gabar jilicsan oo isboorti ah oo tagi karta-go-go. Macaan oo maskaxda ku haysa guriga, waa farxad inay ag joogto. 28 lbs. ' Lahaanshaha sawirka Noble Boston Bulldogges
'Willie waxaa sifeeyay GrCh Kodiak oo aad loo ixtiraamo. Biyo xireenka Willie waa Kaw-keena, kaasoo ay soo kiciyeen Goodtime Kennels. Kaw waa soo saare la xaqiijiyay oo ka mid ah cayaartoyda canine-ka heer sare leh ee Willie oo ah tusaale aad u fiican. Waxaa laga soo qaatay sida ugu fiican uguna fiican ee Bulldogges-ka casriga ah ee Boston, Willie waa dib-u-dhalasho aan iin lahayn oo ku timid noocii hore ee Boston Bull iyo Terrier. Dabcan dabiici ahaan dheer oo xoog badan cabirkiisa, wadista Willie iyo rabitaankiisa shaqo iyo ciyaar waa in loo arkaa in la rumaysan karo. Waa qof bulsheed oo jecel dadka oo dhan — gaar ahaan carruurta. 30 lbs. ' Lahaanshaha sawirka Noble Boston Bulldogges
La kulan Madison! Iyadu waa hadal heynta magaalada. 2 ½ sano iyo madax wareegsan oo run ah. Waxay ka timid asal ahaan Boston Bulls ka hor intaan la soo saarin. Waa gabadh caato ah oo si fiican loo miiray oo dhererkeedu yahay 31 rodol (14 kg).
'Tani waa merle buluug ah, lab ah OBB oo loo yaqaan' BigBully Kennel's Rebel '.
'Blue merle, lab ah Olde Boston Bulldogge oo loo magacaabay BigBully Kennel's Rebel.'
'Kani waa Tonka, oo ah 3.5-bilood jir Olde Boston Bulldogge eey ah oo ka socda BigBully Kennels.'
Murphy the brindle brown and white Olde Boston Bulldogge yar yar oo jira 6 bilood
Eeg tusaalooyin badan oo Olde Boston Bulldogge ah
Olde Boston Bulldogge Sawirada 1
Olde Boston Bulldogge Sawirada 2
Olde Boston Bulldogge Sawirada 3
Cocker sarkaal dahabka qas spaniel for sale
papillon SUNTZU shih qas for sale
ingiriiska bulldog iyo beagle mix
staffordshire bull terrier labrador qas
havanese cavalier king charles spaniel